Da’da hooyada oo la sheegay in ay saameyso horumarka caruurta | Somaliska
Cilmi baaris ay sameeyeen khuburo ka tirsan Jaamacada London ee Dhaqaalaha iyo Siyaasada ayaa lagu sameeyay caruurta ay dhaleen hooyooyinka da’da weyn ayaa soo bandhigtay in ay yihiin kuwo ka horumar fiican kuwa ay dhaleen hooyooyinka da’da yar. Sweden oo ay caado ka tahay in aysan haweenku caruur dhalin ilaa ay sodonka dhaafaan ayaa baaritaankaan laga sameeyay. Hadaba waa maxay faa’iidooyinka lagu soo bandhigay cilmi-baarista.
Waxaa ka mid ah in caruurta ay dhaleen hooyooyinka waaweyn ay ku fiicanyihiin waxbarashada, maadaama ay haystaan hooyo waayo arag ah oo inta badan laga yaabo in ay ka baxday heer jaamacadeed. Waxaa intaa dheer in heerka luuqadooda ay ka fiicantahay kuwa kale. Waxay intaas ku dareen caruurtaasi ay helaan waqti fiican oo ay waalidkooda la qaataan.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay cilmi baarista in caruurta xitaa ay cimri dheeraad iyo xitaa in dhereerkooda jirka uu ka dheeraado kuwa kale.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa cilmi baaristu aysan hilmaamin in hooyooyinka da’da weyn ay qatar ugu jiraan in ay ku adkaato dhalmada, in ay la soo daristo qatar ilmaha iyo in xitaa ay kansar qaadaan.
Maku raacsantahay in ay fiicantahay in dib loo dhigo caruurta?
30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 2
Haweenka waxaa madaxa loogu furay iyagoo da’yar in ay waxbarasho dheerad galaan, sida nimanka u shaqeeyan, oo ilaahay na howsha naagta ugu tala galay; in ay gurigooda maamulan, carrurta xasilooni ku barbaariyaan o wax baraan, in ay ka jeestaan. Waa bulshada oo nagaha meel darran ka tuuraya oo wax kale meel ugu daareen. In sida nimanka u dhaqmaan naagaha oo na la kala saareyin jinsiyad naagta iyo ninka. Nadaamka qoyska aa laga tagay oo la haleeyay. Waa bulshad lacag u jeedo kiliya o dadka cafimaadkood iyo waxa kale qiimeyneynin, taas ogaada.
Taas uun ba keeneyso in 35 jir haweenka ku dhalaan iyaga oo soo aqliyeystay waxay ka daba ordayaan in ay faa’ido laheen.
July 4, 2016 at 13:21
Mr Jimcaale markaan Waa Feker Reer Galbeed !
Gabdhahooda iska tunta ilaa da’da 35 ee halka canug dhala ayay niyada ugu dhisayaan !
Ka Muslimiin ahaanse waxaan ayidaynaa waqtiga Ilaah Guurka Banneeyay misna yaraanta in lagu dhalaa wanaag badan.
Sababtoo ah Cimri ayay isla helayaan ilmaha iyo waalidkood.
Tusaale 17 gabadha ku dhasha hadday 77 ku dhimato 60 sano ayay ilmaheeda iyo ilmahay sii dhaleen ilaa jiilka afaraad la qaadatay !
Allaahu Akbar…. War yaraanta ku tarma waa Nimcee Tallaahi qofkii tijaabiyaa og.
Duq waayeel reer Galbeeda ayaa tagtay Gobolka Bari iyadoo Hay’ad ka masuula kolkaabay tiri shirbaan u qabanaa dumarka iisoo kulmiya.
Waa loosoo kulmiyay, siday guurka iyo qoyska uga hadlaysay, waxaa kasoo dhex galay Hooyo Soomaaliyeedbaa soo boodoo tiri su’aal Imisa ubad ahbaa dhashay ?
Islaantii Caddaanka tiri maba maba guursan!!
Hooyadii Soomaaliyeedbaa ku tiri – Haddaba Ninkii ADIGA KU GUURSAN LAHAA , NIN KALAA KAA GUURSADAY !
Naagtii Caddaanka Boorsadeedii duuduub u qaadatay wayna iska carartay !!
July 4, 2016 at 16:19
soo gaal ma korinaayaan fiicnaantiisa marka laga soo tago anaga dhaqankooda si aan la dareemeynin noo baraayaan
cilmi baaristaan sax ilama ahan sababtoo ah hadii haweenka ku dhalanaa 35 wixi ka koreyo ilmaha ay dhalaan natiijadeeda waa la arkay waxan taas daliil u ah ilmahooda markuu 18 gaaro muxu u naca ama ugu tagaa waalidkii weyninka iyo waqtiga siisey marka waa cilmi baaris dhankale u soco
Hooyo waa tii yaraan ku guursatoo ilahay ubad siiyo siday isu wada la ekaadaan adigoo dhalyaa lashaqystaa waxna la bartaa lakiin 30 Marky gaarto qofka dumrka ah jirkedu nin buu isku badlaa gaaladaan marba filin yeysan noo kenin